XOG CUSUB-Dedaalo Lagu Heshiisiin Lahaa Puntland iyo DFS oo Fashilmay iyo Cidda Ka Dambaysa.
June 12, 2019 puntlandnews Puntland, Wararka Maanta 1
Puntlandnews.net (Garoowe)-Xog hoose oo warbaahintu heshay ayaa sheegaysa inay fashilmeen dedaalo dhex dhexaadin ah oo la doonayey in laysugu soo dhoweeyo madaxda Puntland iyo DFS, si Puntland uga laabato go’aankii joojinta wadashaqaynta oo caqabad ku noqday Muqdisho.
Masuuliyiin katirsan golayaasha dowladda Soomaaliya ayaa wararku sheegayaan inay ku fashilmeen sidii madaxweynaha Puntland loogu qancin-lahaa in uu dib u soo celiyo xiriirkii wada-shaqeynta ee kala dhexeeyay xukuumadda dowladda Federaalka Soomaaliya.
Axmed Ciise Cawad wassiirka arrimaha dibadda Soomaaliya, xildhibaan Cali Yuusuf Cali Xoosh iyo xubno kale oo ka soo jeeda Puntland ayaa ku guul-darraystay inay Puntland gaar ahaan madaxda ugu saraysa ku qanciyaan inay ka laabato go’aankeeda lana heshiiso dowladda dhexe.
Ilo xogogaal aha aya warbaahinta qaar u sheegay in madaxweynuhu uu guud ahaanba diidey ka laabashada go’aankaasi si DSF ugu dhaqantao dastuurka, loogana heshiiyo arrimaha ay isku khilaafsan yihiin labada dhinac.
Dhanka kalena, madaxxweynaha dowladdda Puntland oo ku maqan dalka Shiinaha ayaa lafilayaa inuu soo laabashadiisa kadib magaalada Nairobi kula kulmi doono madaxweynayaasha Galmudug, Jubaland, HirShabeelle iyo xubno ka socda Beesha Caalamka.
DF waxay dhaqan ka dhigteen in ay ragadiyaan geedi socodka hamiga umada somaaliyeed. Dowlad goboleedyaduna waxay dhaqan ka dhigteen in ay xiriirka u jaraan DF-ka, hadana markii la sasabto xiriirka soo celiyaan ayagoo haysan damaanad qaad caga ku taagan oo xaqiijinaya in ay DF’ku meeshii kasii wadahayn hab dhaqankii xumaa oo caadada u ahayd . Xukumada cusub ee puntland waxaa la gudboon in ay ka leexato hab dhaqankii hore ee xukumadihii ka horeeyey oo aysan si fudud loo sasaban. Waa in shuruud adag oo damaanad qaad adag leh lagu xiraa soo celin xiriir, hadi kale sheeko waa jugjug meeshaadii joog.